မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: အချစ်ဟောင်း.... သို့
Posted by mabaydar at 8:28 AM
Now i know what's happening with you! Don't put yourself in misery so much for something unworthy..!
You know your post is very very good. I appreciate the beauty of your thoughts.
ဒေါသနဲ့ နာကျည်းမှု မဗေဒါ ရင်ထဲရှိနေသ၍
စိတ်ပညာသဘောအရ မဗေဒါ ရှုံးနေမှာပဲဗျ။
မဗေဒါ... ရင်ထဲကအနာ မြန်မြန်ကျက်ပါစေ။
4/04/2008 1:11 AM
heartmuseum ရေ.. ထူးဆန်းတာက ကျမဒေါသလဲမထွက်ဘူး နာလဲမကျည်းဘူး.. သူကိုလဲချစ်နေသေးတုံးပဲ.. ဒါပေမဲ့ ကျမဖြစ်ချင်တာက သူ့အပေါ်မှာ ဘာမှမခံစားချင်တော့တာ.. မုန်းတာပဲဖြစ်ဖြစ် ချစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် နာကျည်းတာပဲဖြစ်ဖြစ် ဘာမှကို သူ့အတွက်မခံစားပေးချင်တော့ဘူး..သူဟာကျမအတွက် လုံးဝ plain သက်သက်လူတစ်ယောက်လို့ပဲမြင်ချင်တော့တာ.. ဥပက္ခာပြုတယ်ဆိုတာလဲ သတိရနေမှာစိုးလို့ တမင်လုပ်ယူနေရသလိုပဲ.. ကျမ သူ့အတွက် ဘာဆို ဘာမှမလုပ်ပေးချင်တော့တာ.. အဲလိုမျိုးဖြစ်ချင်တာ.. သူ့အတွက် နာကျည်းတယ်ဆိုတဲ့ ခံစားချက်တောင်ကျမ မပေးချင်တော့ဘူး.. အဲဒိအတွက် လောလောဆယ် ကျမ လွမ်းချင်လဲ လွမ်းနေမယ်.. ကျမဘဝကိုလဲ ပုံမှန်လည်ပတ်နေမယ်. သူ့အကြောင်း ခေါင်းထဲရောက်လာရင် ခဏတွေးမယ်.. တဖြည်းဖြည်းအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ သူဟာ ကျမဘဝထဲကပျောက်သွားမှာပါ.. လောလောဆယ် ကျမရှုံးကောင်း ရှုံးနေပေမဲ့.. နောင်တချိန်ကောင်းသွားမှာပါ.. အော်.. နောက်ပြီး ကျမဘဝ ကျမမိသားစုဘဝ အနာဂတ်အတွက် ကျမပိုပြီးကြိုးစားလာတယ်ဆိုတာလေးလဲပြောပရစေ.. ဒီရောဂါက နာတာရှည်စိတ်ရောဂါဆိုပေမဲ့ ကုလို့ပျောက်ပါတယ်..
ဒီလိုပဲဖြစ်သင့်ပါတယ်။ သူများသာ ဆရာလုပ်တာ
ကျွန်တော်ကတော့ မေ့လို့မရဘူးဗျို့။ မေ့မရဆို မေ့ဖို့လည်း
မကြိုးစားဘူးလေ။ ဘ၀ရည်မှန်းချက်ဆိုတာလဲ မရှိတော့ပါဘူးဗျာ......
4/07/2008 7:29 AM
အမအတွက် အချစ်စစ်ရှိလာမှာပါ..ဘာလို့လဲဆိုတော့ အမလိုအဖြစ်မျိုးကြုံခဲ့ဖူးလို့လေ.အမထက်ဆိုးတာက အရင်မိန်းမရဲ့ အရှက်ခွဲခြင်းကိုပါ ရုံးမှာပါ.အိမ်မှာပါ နင့်နေအောင်ခံလိုက်ရလို့လေ.
ဒါပေမယ့် ခုချိန်မှာတော့ တကယ်ကိုစစ်မှန်တဲ့..ကိုယ့်အပေါ်ကိုနားလည်မှုအပြည့်ပေးနိုင်တဲ့ ချစ်သူနဲ့ ဆုံလိုက်ရလို့လေ...
အမလည်း အဲ့လိုတွေ့မှာပဲ..ကျိန်းသေကို အစစ်အမှန်လူနဲ့ တွေ့မှာ..လုံးဝသေချာတယ်..